China Tube Fiber Laser Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - XTLASER
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Tube ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
XTLASER ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလေဆာစက်မှုလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်လေဆာအသိဥာဏ်ရှိသောထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်ကိုအဓိကထားသည်၊ ဖောက်သည်များကိုအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စနစ်ဖြေရှင်းမှုများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ရှေ့တွင်ဆက်လက်ရပ်တည်နေသည်။ ထုတ်လုပ်သည့်ပြွန်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း။ ၂၈၀၀၀ ဂရမ်ရှိသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည်တစ်ချိန်တည်းရာနှင့်ချီသောလေဆာဖြတ်စက်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏တည်ရှိမှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုကိုကြိုဆိုပါသည်။
Tube ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်သည်တည်ငြိမ်သော capacitance positioning ကိုအစားထိုးရန်ဆန်းသစ်သော photoelectric positioning ကိုအသုံးပြုသည်။ အမြင့်ဆုံးဖြတ်တောက်မှုအချင်းသည်ပျမ်းမျှထုတ်ကုန်များထက် ၃၀% ပိုရှည်ပြီးအမြင့်ဆုံး bearing သည် ၁၀၀% ပိုမိုခိုင်မာသည်။ ထို့ပြင်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစက်များသည်သင့်လျော်သောအရှည်အားလုံး၏ပြွန်များအတွက် ၀.၁၅ မီလီမီတာအတွင်းတွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျယ်ပြန့်သောပြွန်များအတွက်သင့်လျော်သည်။
စက်များအားလုံးသည် European Union CE authentication ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီး F အမေရိကန် FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး ISO 9001.XTLASER နည်းပညာကိုဂျာမနီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ရုရှား၊ မလေးရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရေနံပိုက်လိုင်းများ, ဓာတုပစ္စည်းကိရိယာများ, HVAC ပစ္စည်းကိရိယာများ, သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်း, ယခုကျယ်ပြန့်အသုံးချပါပြီ။
စံပိုက်လေဆာဖြတ်စက်အားလုံး Tubes အားလုံးပတ်ပတ်လည်နှင့်စတုရန်းပြွန်များကဲ့သို့သောသမားရိုးကျပြွန်များ၊ ချန်နယ်နှင့်ထောင့်သံမဏိများနှင့်အထူးပုံစံပြွန်များကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောဖြတ်တောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဖြတ်ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ ကြေးဝါ၊ အနီရောင်သမဝါယမ၊ အလူမီနီယမ်စသည်တို့။ အထူးအပိုင်းပြွန်များကိုဖြတ်ပါ။
လေဆာဖြတ်စက်အားလုံး Tubes အားလုံးအဝိုင်းနှင့်စတုရန်းပြွန်များကဲ့သို့သောသမားရိုးကျပြွန်များ၊ channel နှင့် angle steel နှင့်အထူးပုံစံ tubes များကိုဖြတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဖြတ်ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ ကြေးဝါ၊ အထူးအပိုင်းပြွန်များကိုဖြတ်ပါ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပိုက်လေဆာဖြင့်ဖြတ်တောက်သောစက်အားလုံး Tubes အားလုံးအဝိုင်းနှင့်စတုရန်းပြွန်ကဲ့သို့သောသမားရိုးကျပြွန်များ၊ ချန်နယ်နှင့်ထောင့်သံမဏိများနှင့်အထူးပုံစံပြွန်များကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောပြွန်များကိုဖြတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ ကြေးဝါ၊ အနီရောင်သမဝါယမ၊ အလူမီနီယမ်စသည်တို့။ အထူးအပိုင်းပြွန်များကိုဖြတ်ပါ။
ပြွန်များအတွက်လေဆာဖြတ်တောက်သည့်စက် Tubes အားလုံးသောအဝိုင်းနှင့်စတုရန်းပြွန်များ၊ ရိုးရှင်းသော channel နှင့် angle steel နှင့်အထူးပုံစံပြွန်များကဲ့သို့သောသမားရိုးကျပြွန်များကိုဖြတ်ရန်လွယ်ကူသော Cube ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ ကြေးဝါ၊ အထူးအပိုင်းပြွန်များကိုဖြတ်ပါ။
သံမဏိပြွန်လေဆာဖြတ်စက်သည်အမျိုးမျိုးသောပိုက်များနှင့်စတီးချောင်းများကိုဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် U အမျိုးအစားသံမဏိ၊ C အမျိုးအစားသံမဏိ၊ H-beam၊ စတုဂံပြွန်၊ ပတ် ၀ န်းကျင်ပြွန်၊ မြင်းခွာပြွန်နှင့်အခြားအထူးပုံသွင်းပြွန်များတွင် ၃၆ ဒီဂရီခုတ်ဖြတ်နိုင်သည်။
Metal Tube လေဆာဖြတ်စက်
သတ္တုပြွန်လေဆာဖြင့်ဖြတ်တောက်သောစက်သည်ပိုက်အမျိုးမျိုးနှင့်သံမဏိချောင်းများကိုဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် U အမျိုးအစားသံမဏိ၊ C အမျိုးအစားသံမဏိ၊ H-beam၊ စတုဂံပြွန်၊ ပတ် ၀ န်းကျင်ပြွန်၊ မြင်းခွာပြွန်နှင့်အခြားအထူးပုံသွင်းပြွန်များတွင် ၃၆ ဒီဂရီခုတ်ဖြတ်နိုင်သည်။
XTLASER သည်ကျော်ကြားသော Tube ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ဖန်စီဒီဇိုင်းများရှိသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Tube ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CE အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ Tube ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!